Archive du 20200324
Coronavirus 17 ireo voa, 15 hafa “wanted”
Misy olona 5 vaovao voamarika fa mitondra ny valan’aretina, raha ny nambaran’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Olona 17 izany no mitondra izany amin’izao fotoana iza, ary arahi-maso akaiky ny fitsaboana.
Hanitra Razafimanantsoa “Tsy hanavahana ny fepetra raisina”
“3 no narary ny zoma , 12 "cas confirmés" sahady ny alahady. Ireo aloha no azon' ny Filoha notenenina”hoy ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa. Mipetraka kosa ny fanontaniana, hoy izy:
Antoko TAMAMI “Fotoana hisokafan’ny fitondrana izao!”
Fotoana izao hanehoana ny firaisankinam-pirenena, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika TAMAMI.
Fisorohana ny Covid 19 1253 mitoka-monina
Ny 112 tamin’ireo mpandeha 145 tamin’ny sidin’ny Air Madagascar MD 51 ny 19 martsa no tratra antso tamin’ny fiantsoana nataon’ny manam-pahefana eto amin’ny tany sy ny firenena.
Mitohy ny krizy eo anivon'ny orinasam-panjaka Kraoma. Nikorontana noho ny fasintahan'ny mpiara-miombon'antoka Rosiana ilay planina fanerenana saika ho hatao izay nahatonga an'ireo mpiasa hitaky ny karaman'izy ireo tsy mbola voaloa tamin'ny zoma lasa teo.
Ady amin’ny Coronavirus Navoaka ny fiara mifono vy
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny MBC Ivato ny « Centre de commandement operationnel » hoenti-mifehy sy miatrika ny areti-mandripaka coronavirus na
Haino aman-jery manerana ny Nosy Miara-manonja avokoa
Tsy maintsy miara-manonja avokoa ny haino aman-jery rehetra manerana ny Nosy, raha ny toromariky ny fanjakana, izay nohamafisin’ny Tale
Ankorondrano Nisy mpivarotra gazety nosamborin’ny polisy
Nisy mpizara gazety na “crieur” nosamborin’ny polisim-pirenena omaly teny Ankorondrano omaly. Niantso ny Polisin’ny SUT Tsaralalana noho izany ny Filohan’ny Holafitra na ny OJM Atoa Gérard Rakotonirina.
Fiatrehana ny COVID19 “Ilaina ny fanazavan-tsaina”
Mazava ny nambaran’ny filoham-pirenena, hoy ny sekretera jeneralin’ny faribolam-pandinihana miozolimanina, Moussa Soalihy, raha naneho ny heviny mikasika ny fihanaky ny valan’aretina COVID19 eto Madagasikara ankehitriny.
Tsena mora Niteraka fitangoronana be
Isan’ny fepetra noraisin’ny fanjakana hoenti-mitsinjo ny vahoaka eo anatrehan’ny olana nateraky ny fanapahan-kevitra momba ny coronavirus ny fanaovana “Tsena mora”.
Antananarivo Renivohitra Hajanona avokoa ny tsena isan-kerinandro
Anisan’ny lalana iray hahafahana mandresy ny otrik’aretina Coronavirus ny fanajana ny fahadiovana.
Fiveloman’ny madinika Mitohy ny fiainana
Mitohy ny fiainana ho an’ireo gasy madinika na dia efa voarara aza hatramin’ny omaly fa tsy misy mahazo mivoaka ny trano intsony ny rehetra ary olona iray ihany no mandeha miantsena. Toy ny isan’andro ihany anefa no hita teny amin’ireo faritra maro eto an-drenivohitra toy ny eny amin’ny 67 ha, ambodin’Isotry, Anosibe….
Laharana maitson’ny Coronavirus 23.000 isan’andro ny antso voaray
Taorian’ny nahafantarana fa efa mahatratra 12 ireo olona voan’ny coronavirus eto amintsika dia nanao tohivakana ny antso voarain’ilay laharana maitso 910.